【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】COVID 19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ နှငျ့ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျးဆိုငျရာ သိကောငျးစရာမြား | Opinion Leaders
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】COVID 19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ နှငျ့ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျးဆိုငျရာ သိကောငျးစရာမြား
ယခုအခါ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID 19 ရောဂါသညျ အသကျရှုလမျးကွောငျးမှ ကူးစကျနိုငျ သကဲ့သို့ လူနာ နှာခြေ ခြောငျးဆိုးလိုကျတဲ့အခါ ထှကျလာတဲ့ droplet လို့ချေါတဲ့ ရောဂါပိုး အမှုနျအမှားလေးတှကေ ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ အရာဝတ်ထုပစ်စညျးတှပေျေါမှာလညျး အသကျရှငျ နထေိုငျနိုငျပွီး ထိုပစ်စညျးတှကေို ထိကိုငျမိရာကနလေညျး ကူးစကျနိုငျတာကွောငျ့ မိမိပတျဝနျးကငျြ အထူးသဖွငျ့ အမြားနဲ့ဆိုငျတဲ့ နရောတှမှော ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျး အကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျရပါ တယျ။
(၁)အစှနျးခြှတျဆေး အရညျနှငျ့ အမှုနျ့ကို အသုံးပွု၍ ပိုးသနျ့စငျခွငျး
(၂)70% Ethyl Alcohol spray ကို အသုံးပွု၍ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျး
(၃)ဆပျပွာရညျကို အသုံးပွု၍ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
(၁)အစှနျးခြှတျဆေး အရညျနှငျ့ အမှုနျ့ ကိုအသုံးပွု၍ ပိုးသနျ့စငျခွငျး
-အစှနျးခြှတျဆေးအရညျ Sodium hypochlorite (သို့မဟုတျ) အစှနျးခြှတျဆေးအမှုနျ့ Calcium hypochlorite တို့ကို ရဖွေငျ့ အခြိုးကရြောစပျခွငျးဖွငျ့ 0.1% sodium hypochlorite solution (သို့) 0.1% Calcium hypochlorite solution ပါဝငျသော ပိုးသတျသနျ့စငျဆေးရညျကို ရရှိနိုငျပါသညျ။
ပိုးသတျသနျ့စငျဆေးရညျ ဘယျလိုထိရောကျအောငျ ပိုးသတျနိုငျပါသလဲ?
ပိုးသတျသနျ့စငျဆေးရညျတှငျပါဝငျသော HOCL နှငျ့ OCL- သညျ ဗိုငျးရပျဈ၏ မကျြနှာပွငျတှငျ ပါရှိသော ပရိုတိနျးကို ပကျြစီးစခွေငျးဖွငျ့ COVID 19 ဗိုငျးရပျဈပိုးကို သစေနေိုငျပါသညျ။ ထို့အပွငျ အခွားဗိုငျးရပျဈမြား ဘကျတီးရီးယား မှို နှငျ့ မိုကျကိုဘကျတီးရီးယားမြားကိုပါ ထိရောကျစှာ ပိုးသတျနိုငျခွငျးကွောငျ့ အမြားပွညျသူနှငျ့ သကျဆိုငျသောနရောမြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
(က)အစှနျးခြှတျဆေးအရညျ 5% Sodium hypochlorite ကို အသုံးပွုပါက ရတေဈလီတာတှငျ ဆေးရညျ 20ml (လကျဖကျရညျဇှနျး ၄ ဇှနျး) ထညျ့၍ ဆေးရညျ 1:50 အခြိုးအစားဖွငျ့ ဖြျောစပျ နိုငျပါသညျ။
(ခ)အစှနျးခြှတျဆေးအမှုနျ့ 35% calcium hypochlorite (Bleaching powder) ကို အသုံးပွု ပါက ထမငျးစားဇှနျးရှညျ မောကျမောကျ ၂ ဇှနျး (28gram) နှငျ့ ရေ ၁ လီတာကို ဦးစှာရောပါ။ ထို့နောကျ ရေ ၉လီတာ ထပျမံရောစပျပါ။
(အထူးသတိပွုရနျမှာ အထကျပါ ဆေးရညျနှဈမြိုးလုံးကို ဖြျောစပျပွီး ၂၄နာရီအတှငျးသာ ကုနျအောငျ အသုံးပွုရနျဖွဈပါသညျ။ ၂၄နာရီ ကြျောလှနျပါက အာနိသငျလြော့ကနြိုငျပါသညျ)
ပိုးသတျဆေးရညျ ဖနျြးစဉျ သတိပွုရနျ
၁)လူ၏မကျြစိ အရပွေားတို့နှငျ့ ထိတှမေိ့ပါက အန်တရာယျရှိခွငျး၊
၂)အငှကေို့ ရှုမိပါက အသကျရှုလမျးကွောငျးကို ထိခိုကျစခွေငျး၊
၃)ပါးစပျထဲဝငျပါက အာခေါငျ ခံတှငျး ပကျြစီးစခွေငျး
၄)သတ်တုပစ်စညျးမြား ဆားလောငျစခွေငျး စတဲ့ ဘေးဥပါဒျတှေ ဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ဆေးဖနျြး မညျ့လူသညျ
လကျရှညျအင်ျကြီ၊ အကာအကှယျမကျြမှနျ၊ ပါးစပျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျး ခေါငျးစှပျ၊ လကျအိတျအထူ အရှညျနှငျ့ လညျရှညျဖိနပျ စသော အကာအကှယျ ပစ်စညျးမြားကို စနဈတကြ ဝတျဆငျရမညျ ဖွဈပါတယျ။
‌တနတေ့ကွိမျသာ ဆေးဖနျြးရငျ လုံလောကျပါသညျ။
(၂)70% Ethyl Alcohol spray ကို အသုံးပွု၍ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျး သတ်တုမကျြနှာပွငျမြား (ဥပမာ-steel) ကိုမူ 70% Ethyl Alcohol spray ဖနျြးပီး ၁မိနဈကွာရငျ အဝတျဖွငျ့သုတျကာ ပိုးသတျသနျ့စငျနိုငျပါသညျ။
(၃)ဆပျပွာရညျကို အသုံးပွု၍ ပိုးသတျသနျ့စငျခွငျး
Sodium hypochlorite (သို့မဟုတျ) Calcium hypochlorite ပါဝငျသော ပိုးသတျဆေးရညျ သညျ လူနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြအပျေါ ဥပါဒျဖွဈနိုငျသောကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါက ဆပျပွာရညျနှငျ့ ဦးစှာ ကွမျးတိုကျပွီး ၁၀မိနဈမှ မိနဈ၃၀ အကွာတှငျ ရစေိုအဝတျဖွငျ့ ပွနျလညျပှတျတိုကျခွငျးဖွငျ့လညျး ပိုးသတျသနျ့စငျနိုငျပါသညျ။
ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID 19 ရောဂါသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်နိုင် သကဲ့သို့ လူနာ နှာချေ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ droplet လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါပိုး အမှုန်အမွှားလေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်း အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ပြီး ထိုပစ္စည်းတွေကို ထိကိုင်မိရာကနေလည်း ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် အထူးသဖြင့် အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ရပါ တယ်။
(၁)အစွန်းချွတ်ဆေး အရည်နှင့် အမှုန့်ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသန့်စင်ခြင်း
(၂)70% Ethyl Alcohol spray ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း
(၃)ဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၁)အစွန်းချွတ်ဆေး အရည်နှင့် အမှုန့် ကိုအသုံးပြု၍ ပိုးသန့်စင်ခြင်း
-အစွန်းချွတ်ဆေးအရည် Sodium hypochlorite (သို့မဟုတ်) အစွန်းချွတ်ဆေးအမှုန့် Calcium hypochlorite တို့ကို ရေဖြင့် အချိုးကျရောစပ်ခြင်းဖြင့် 0.1% sodium hypochlorite solution (သို့) 0.1% Calcium hypochlorite solution ပါဝင်သော ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည် ဘယ်လိုထိရောက်အောင် ပိုးသတ်နိုင်ပါသလဲ?
ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည်တွင်ပါဝင်သော HOCL နှင့် OCL- သည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျက်နှာပြင်တွင် ပါရှိသော ပရိုတိန်းကို ပျက်စီးစေခြင်းဖြင့် COVID 19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သေစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အခြားဗိုင်းရပ်စ်များ ဘက်တီးရီးယား မှို နှင့် မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယားများကိုပါ ထိရောက်စွာ ပိုးသတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(က)အစွန်းချွတ်ဆေးအရည် 5% Sodium hypochlorite ကို အသုံးပြုပါက ရေတစ်လီတာတွင် ဆေးရည် 20ml (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း) ထည့်၍ ဆေးရည် 1:50 အချိုးအစားဖြင့် ဖျော်စပ် နိုင်ပါသည်။
(ခ)အစွန်းချွတ်ဆေးအမှုန့် 35% calcium hypochlorite (Bleaching powder) ကို အသုံးပြု ပါက ထမင်းစားဇွန်းရှည် မောက်မောက် ၂ ဇွန်း (28gram) နှင့် ရေ ၁ လီတာကို ဦးစွာရောပါ။ ထို့နောက် ရေ ၉လီတာ ထပ်မံရောစပ်ပါ။
(အထူးသတိပြုရန်မှာ အထက်ပါ ဆေးရည်နှစ်မျိုးလုံးကို ဖျော်စပ်ပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသာ ကုန်အောင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၄နာရီ ကျော်လွန်ပါက အာနိသင်လျော့ကျနိုင်ပါသည်)
ပိုးသတ်ဆေးရည် ဖျန်းစဉ် သတိပြုရန်
၁)လူ၏မျက်စိ အရေပြားတို့နှင့် ထိတွေ့မိပါက အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊
၂)အငွေ့ကို ရှုမိပါက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေခြင်း၊
၃)ပါးစပ်ထဲဝင်ပါက အာခေါင် ခံတွင်း ပျက်စီးစေခြင်း
၄)သတ္တုပစ္စည်းများ ဆားလောင်စေခြင်း စတဲ့ ဘေးဥပါဒ်တွေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆေးဖျန်း မည့်လူသည်
လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ အကာအကွယ်မျက်မှန်၊ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း ခေါင်းစွပ်၊ လက်အိတ်အထူ အရှည်နှင့် လည်ရှည်ဖိနပ် စသော အကာအကွယ် ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
‌တနေ့တကြိမ်သာ ဆေးဖျန်းရင် လုံလောက်ပါသည်။
(၂)70% Ethyl Alcohol spray ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း သတ္တုမျက်နှာပြင်များ (ဥပမာ-steel) ကိုမူ 70% Ethyl Alcohol spray ဖျန်းပီး ၁မိနစ်ကြာရင် အဝတ်ဖြင့်သုတ်ကာ ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။
(၃)ဆပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း
Sodium hypochlorite (သို့မဟုတ်) Calcium hypochlorite ပါဝင်သော ပိုးသတ်ဆေးရည် သည် လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဥပါဒ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါက ဆပ်ပြာရည်နှင့် ဦးစွာ ကြမ်းတိုက်ပြီး ၁၀မိနစ်မှ မိနစ်၃၀ အကြာတွင် ရေစိုအဝတ်ဖြင့် ပြန်လည်ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်ပါသည်။
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】ခွထေောကျသှေးခဲပိတျခွငျး (DVT) အကွောငျးတစတေ့စောငျး
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】COVID 19 ရောဂါ နှငျ့ ကိုယျခံအားစနဈမွှငျ့တငျခွငျး